FALLO: Wax ka Ogow Kulanka Xiisa Leh Ee Caawa Dhexmari doona Xulalka Germany vs Netherlands | Lughaya.Com
FALLO: Wax ka Ogow Kulanka Xiisa Leh Ee Caawa Dhexmari doona Xulalka Germany vs Netherlands	Added by adal on June 13, 2012.Saved under FaaloTags: featured	Notice: Undefined variable: counter in /home3/saylicip/public_html/wp-content/themes/city-desk/inc/theme-gallery.php on line 43
Xulka Orange ayaa caawa indhaha ku haaya inay ka soo kabsadaan guuldaradii ka soo gaartay Denmark, marka ay caawa la ciyaarayaan xulka Jarmalka oo guul soo gaaray kulankoodii ugu horeeyay, waxaana la filayaa inuu kulankaan noqdo midkii ugu xiisaha badnaa ee ilaa iyo haatan la ciyaaro.
Netherlands ayaa heshay war lagu farxo ka hor kulankaan, ka dib markii uu dhaawac ka soo laabtay daafacooda Joris Mathijsen.
Daafaca dhexe ee kooxda Malaga ayaa seegay kulankii Denmark isagoo dhaawac qabay, lakiin waxa ay u badan tahay inuu caawa booska ka bedelan doono Ron Vlaar.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Wesley Sneijer ayaa isna la filayaa inuu ku soo bilowdo inkastoo uu dhaawac yar soo gaaray, halka tababare Bert van Marwijk uu cadaadis kaga imaanayo inuu ku soo bilaabo Klaas-Jan Huntelaar halkii uu ku soo bilaabi lahaa Robin van Persie.
Dhinaca kale, tababaraha xulka Germany Joachim Low ayaan wax walwal ah ka qabin dhaawac cusub, lakiin waxaa la filanayaa inuu isbedel ku sameeyo weerarkiisii ka dib qaab ciyaareed hooseeya oo uu kala hortagay Portugal.
Andre Schurrle, Marco Reus iyo Mario Gotze ayaa dhamaantood doonaya inay ku bilowdaan, iyadoo Lukas Podolski ama Thomas Muller uu midkood boos baneyneyn doono.
Netherlands ayaa badiyay seddex ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeysay ee tartan rasmi ah.Netherlands ayaa badiyay seddex ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeysay ee tartan rasmi ah.
Xulka Orange ayaa wajahaya Germany markii 39aad, waxaana 10 jeer badisay Holland, 14 jeer waxaa badisay Germanay halka 14 kulan kale ay barbaro ku kala baxeen.
Kulankii ugu danbeeyay ee labadan kooxood waxa ay ciyaar saaxiibtinimo bishii November ee sannadkii hore ay ku wada ciyaareen Hamburg, iyadoo Jarmalka ay ku badiyeen 3-0.
Mark van Bommel ayaa jaale qaatay kulankii Denmark, waxaana uu ganaax u jiraa hal jaale kale.
Germany ayaa ciyaarihii ugu danbeeyay ee ay ka horyimaadeen Holland waxa ay lahaayeen gacanta sarre. Seddexdii kulan ee ugu danbeysay wax guuldarro ah kama aysan soo gaarin Netherlans.
Iyadoo celceliska da’da xulka Jarmalka uu yahay 24, waxa ay yihiin xulka ugu da’da yar ee ka qeybgalaya Euro 2012.
Lukas Podolski ayaa ciyaari doona kulankiisii 99aad hadii uu ka horyimaado Holland, waxaana uu ka sarre mari doonaa Michael Ballack oo haatan ah ciyaaryahanka 7aad ee ugu safashada badan xulka Jarmalka.
Holger Badstuber iyo Jerome Boateng ayaa hal jaale u jira ganaax.
Ciyaarta: Netherlands v Germany
Waqtiga: 9:45 pm xilliga Afrikada Bari
Garsoore: Jonas Eriksonn (Sweden)